Revision as of 12:03, 31 July 2019 (view source)
*[[Harare]], [[Bulawayo]], [[Gweru]], [[Mutare]], [[Beitbridge]], [[Masvingo]], Plumtree, Zvishvane, Kariba, Chinhoyi, Nyanga, Chipinge, Birchnough Bridge, Chivi, Zaka, Mutoko, Rusape among others. Besides local routes, the bus company also operates international routes for example from Harare to Lilongwe the Blantyre in Malawi and Harare to Lusaka the capital city of Zambia. It has also routes from Harare to Johannesburg in South Africa.
*[[Harare]], [[Bulawayo]], [[Gweru]], [[Mutare]], [[Beitbridge]], [[Masvingo]], Plumtree, Zvishvane, Kariba, Chinhoyi, Nyanga, Chipinge, Birchnough Bridge, Chivi, Zaka, Mutoko, Rusape among others. Besides local routes, the bus company also operates international routes for example from Harare to Lilongwe the Blantyre in Malawi and Harare to Lusaka the capital city of Zambia. It also has routes from Harare to Johannesburg in South Africa.
== The Rural Bus Service ==
Revision as of 12:03, 31 July 2019
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Zimbabwe_United_Passenger_Company&oldid=81336"